Nagarik Shukrabar - ‘हिन्दीमा पनि दोहोरी गाएँ’
बुधबार, ०५ कार्तिक २०७७, ०७ : ३६
‘हिन्दीमा पनि दोहोरी गाएँ’
सोमबार, १३ माघ २०७६, १२ : ३४ | शुक्रवार
‘पञ्चेबाजा, तिर्खा मेटिएन, माझी दाइलगायत दर्जनौं लोकगीतमा आवाज भरेकी गायिका हुन गीता सेन्चुरी। उनले दोहोरीसाँझमा काम गरेको पनि १२, १३ वर्ष भइसकेको छ। हालै नारायणहिटी दरबारको उत्तरपट्टी रहेको किङ दोहोरीसाँझमा गीत गाइरहेकी छन्। उनीसँग भोला अधिकारीले गरेको रात्रिकालीन कुराकानी :
तपाईंले नाइटमा काम गर्न थालेको कति वर्ष भयो ?
त्यस्तै १२, १३ वर्ष जति भयो।
किन नाइटमै दोहोरी गाउन रोज्नुभएको हो ?
दोहोरीसाँझमा गीत गाउनुभन्दा अगाडि नै मैले गीत रेकर्ड गरिसकेकी थिएँ। पछि दोहोरीसाँझमा आएकी हुँ। मैले दोहोरीसाँझमा गाउनु भनेको नै रियाज हो भन्ठान्छु।
तपाईंंले पहिलोपटक कुन दोहोरी साँझबाट गाउन थाल्नुभएको हो ?
नयाँ बानेश्वरमा रहेको ‘साली भेना’ दोहोरीसाँझ थियो। त्यहाँ मलाई एकजना वाद्यबादक कमल ओली दाइले दोहोरी गाउछौ त भन्नुभयो। मैले सानैदेखि स्कुलको दोहोरीहरुमा गाउदै आएकोले गाउछु भनैँ। दाइले दोहोरीसाँझ थाहा छ भन्नुभयो। मलाई त थाहा छैन भनेँ। मलाई दोहोरीसाँझ कस्तो हुन्छ के हुन्छ थाहा थिएन। मेरो आफ्नै दाइ क्षितिज सेन्चुरी पनि गायक हुनुहुन्छ। मैले दाइलाई सोधेँ, दाइ दोहोरीसाँझ कस्तो हुन्छ। एकजना दाइले दोहोरीसाँझका लागि कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँले राम्रोसँग काम गर्दा ठिकै हुन्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो। दाइले त्सो भनेपछि मैले ‘साली भेना’ दोहोरीसाँझबाट रात्रिकालीन काम गर्न थालेकी हुँ।
नाइटमा आवतजावत गर्दा कहिल्यै अप्ठ्यारो परेन ?
दाइ भाउजु काठमाडाैँमै भएकोले मलाई कुनै गाह्रो परेन, सहज नै थियो।
प्रायः कलाकारहरुले दोहोरीसाँझ फेरिरहने गर्छन्। तपाईंंले फेर्नुभएको छ कि छैन ?
मैले पनि फेरेकी छु। ‘साली भेना’ छोडेपछि धुम्बाराहीमा रहेको ‘दौँतरी’ दोहोरीसाँझमा काम गरेँ। जुन दोहोरीसाँझ चर्चित लोकगायिका इन्दिरा गुरुङको थियो। उहाँकोमा काम गर्न निकै टाढा लाग्यो। टाढा भएकोले मैले ‘मायालु’ दोहोरीसाँझ हुँदै अहिले नारायणहिटीको उत्तरपट्टिको ‘किङस्’ दोहोरीसाँझमा आइपुगेकी छु। मैले नेपालमा मात्र होइन। विदेशका दोहोरीसाँझमा पनि गाएकी छु। युएइ, जापान र भर्खरै कतारमा पनि दोहोरीसाँझ खुलेका छन्।
युएइमा कुन दोहोरीसाँझ थियो र ?
‘याक एण्ड यति’ रेस्टुरेन्ट एण्ड लाइभ दोहोरीसाँझ थियो। स्याङ्जाको नारायण न्यौपाने दाइले मलाई त्यहाँ लैजानुभएको हो। म एकपटक पाँच महिना बसेँ। अर्कोपटक छ महिना बसेँ। आज भन्दा पाँच वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यसपछि कार्यक्रमकै सिलसिलामा जापान पुगेकी हुँ। रामेछाप समाजको कार्यक्रममा मलाई कलाकारको रुपमा बोलाइएको थियो। हामी गएको ठाउँमा सोलमारी खाजा घर एण्ड रेस्टुरेन्ट थियो । त्योसँगै एउटा सेमिनार गर्ने, पार्टी गरिरहने एउटा हल रहेछ। त्यो ठाउँमा सोल्मारी खाजा घर एण्ड रेस्टुरेन्टका दाइहरुले दोहोरी खोलेर हेरौँ न भन्ने कुरा गर्नुभयो। हामीले त्यहाँ काम गर्ने कुरा ग-यौँ। हाम्रो तीन महिनासम्मको भिसा भएकाले तीन महिना आरामले दोहोरीसाँझ बनाएर गायाैँ।
तपाईंहरु को–को हुनुहुन्थ्यो नि ?
नेपालबाट कार्यक्रममा आठजना कलाकार गएका थियाैँ। चारजना कलाकार नेपाल फर्कनुभयो भने हामी चारजना उतै बस्यौँ। हामीमा पार्वती कार्की, सिर्जु अधिकारी, अमृत खाती र म जापानमै बसेर नेपाली दाजुभाइ दिदी बैनीलाई मनोरञ्जन दिन थाल्याैँ।
अनि पछिल्लो समय कतार गएर आएकी हुँ। हालसालै कतारमा नेपाली दोहोरीसाँझ खुलेको छ। कतारमा दुई महिना गाएर दसैँमा मात्रै घर आएकी हुँ। कतारमा पनि दोहोरीसाँझ खुलेको कुरा धेरेलाई थाहा नहोला।
नेपालको र विदेशको दोहोरीसाँझमा के फरक पाउनुभयो ?
धेरै फरक पाएँ। यता पाइलैपिच्छे नेपाली भेटिन्छन्। विदेशमा भने फाट्टफुट्ट मात्र भेटिने गर्छन्। नेपाली गीत नेपालमा बस्नेलाई भन्दा पनि परदेशमा बस्नेलाई बढी प्यारो हुँदो रहेछ। त्यहाँ मैले के पाएँ भने नेपाली रेस्टुरेन्टमा नेपाली नेपाली भेट हुने रहेछन्। दिनभरिको काममा यसो फ्रेस हौँ भनेर नेपालीहरु नै दोहोरीसाँझमा रमाइलो गर्न आउने रहेछन्।
विदेशीहरु आउँदैनन् ?
आउँछन् तर अलिक कम मात्रामा। कोही कोही विदेशीले नेपाली गीतमा दोहोरी गाएर नाच्छन्। कहिलेकाहीँ मैले हिन्दीमा दोहोरी गाएर इण्डियन दर्शकलाई मनोरञ्जन दिएकी छु। मलाई राम्रोसँग हिन्दी नआए पनि ल-याङ ब-याङ मिलाइदिन्थे। जापानमा हिन्दी गीत गाइएन। कतारमा हामीले दोहोरी गीत गाएको सुनेर बङ्गालीले हिन्दी, बङ्गाली गीतहरु दोहोरीमा गाउने गर्थे।
अलिक छाडापन बढी चल्छ भन्छन् नि ?
दोहोरीसाँझमा सबै एकै किसिमका गेष्ट आउँछन् भन्ने छैन। मैले त दोहोरीसाँझमा भन्दा दोहोरीसाँझ बाहिर स्टेजमा गाउने कलाकारहरु बढी अश्लील गाएको देखिरहेकी छु। दोहोरीसाँझमा यस्तो गाएँ, उस्तो गाएँ भन्ने कुरा गर्छन्। फेरि दर्शकले त्यस्तै रुचाइदिन्छन्। राम्रा गीत गाउनेलाई दर्शकले पनि हेर्दैनन्। कन्सर्टमा पनि बोलाउँदैनन्।